Fiara mpitondra solika | Fanavaozana maintso
Adriana | | Mitsitsy angovo, Biofuel, Biodiesel
ny fiara mpitondra solika Izy ireo dia ao anatin'ny sokajy fiara mifandraika amin'ny tontolo iainana satria mampiasa solika roa izy ireo. Misy dikanteny maromaro, ny mahazatra indrindra dia lasantsy sy etanol afangaro amin'ny ampahany rehetra.
Misy koa ny fiara mampiasa metana sy etanol. Manodidina ny 19 tapitrisa ny solika miparitaka eran'izao tontolo izao, i Brezila no firenena nampivoatra sy nampiroborobo indrindra ity karazana fitaterana ity. Manodidina ny 90% ny fiara amboarina eto amin'ity firenena ity no solika malefaka.
Ny Etazonia, Kanada, Suède ary firenena hafa ao amin'ny Vondrona eropeana dia mampiasa azy ihany koa saingy amin'ny ampahany kely kokoa satria ny etanol dia tsy mora raisina toy ny any Brezila, izay mpamokatra lehibe ity solika ity.
Ny mahatsara an'io karazana fiara io dia ny tsy fandotoana kokoa noho ny fiara mahazatra satria manalavitra ny famoahana CO2 ary ny fiasany dia mitovy amin'ny fiara mahazatra.
Miala amin'ny ozinina miaraka amin'ny fanovana ara-teknika ireo fiara mba hahafahany miasa tsara. Orinasa fiara maromaro no manamboatra azy ireo toy ny Peugeot, Renault, Chevrolet, Honda, Ford miaraka amin'ireo marika hafa. Mihatra amin'ny môtô koa io rafi-pitaterana solika io.
Ho an'ny mpanjifa dia safidy eo anelanelany izy io, mety ho an'ireo tsy afaka mahazo fiara mandeha amin'ny herinaratra na hybrid ho an'ny sarany fa tian'izy ireo tsy ho voaloto ny fiarany.
Ny fampiasana Solika hafa amin'ny fiara tsy miankina izy io dia zava-misy ary takian'ny mpanjifa miahiahy ny tontolo iainana.
Ka ny indostrian'ny fiara dia mampifanaraka haingana amin'ny tsindry sasany avy amin'ny besinimaro fa koa amin'ireo fanjakana te hampihena be ny loto ateraky ny fiara.
Ireo mpamily fiara mampiasa vola amin'ny teknolojia tsy dia manimba ho an'ny tontolo iainana fa manome antoka ny filan'ny olona fitaterana izany.
Ny fiara mpitondra solika Flex dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fandotoana, koa ny fampiroboroboana ny fivoarany dia mitaky fanoloran-tena ho an'ny fanjakana tsy miankina mba hahomby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » Biodiesel » Fiara mpitondra lasantsy